Melleteriga Jaad oo qirtay guul daraddii ugu ballaarneed ee uu abid lakulmo.
0 Saturday April 11, 2020 - 12:39:33
Taliska ciidanka dowladda Jaad ayaa faah faahin dheeri ah ka bixiyay dagaallo khasaara badan dhaliyay oo maalmihii lasoo dhaafay ay ciidamadoodu uga jireen wadanka Nigeria ee dhaca galbeedka qaaradda Afrika.
0 Saturday April 11, 2020 - 11:51:54
Markale shalay dowladda Mareykanka waxay u aheyd maalin madoow kadib markii kumanaan ruux oo American ah ay udhinteen cudurka dilaaga ah ee Carona Virus.
0 Thursday April 09, 2020 - 19:09:28
0 Thursday April 09, 2020 - 12:29:15
Caabuqa dilaaga ah ee Carona Virus ayaa wali gummaad ka wada inta badan wadamada reergalbeedka gaar ahaan Yurub iyo America.
0 Wednesday April 08, 2020 - 16:30:47
Dowladda Xabashida Itoobiya ayaa ku dhawaaqday in ay xaalad degdeg ah kusoo rogtay wadankaas kadib markii uu si xowlli ah ugu faafay cudurka Covid19.